Endless OS 3.9 inouya neKernel 5.8, Gnome 3.38 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni ye Endless OS 3.9 yakatoburitswa kare uye inowanikwa kune veruzhinji. Iyi vhezheni itsva inouya neGnome 3.38 desktop nharaunda, pamwe nechikwata chinotaura izvozvo Iyo Endless desktop timu yakanangana nekuunza maficha ekutanga akagadzirwa muEndless OS kudzokera kuGNOME. Sezvo semuenzaniso, maficha akaita sekufamba kwemifananidzo yedesktop akaendeswa mukudhonza uye kudonhedza modhi uye shandisa zvinodzorwa nevabereki zvemaapps akaiswa.
Kune avo vasingazive nezvekugovera uku Linux, vanofanira kuziva izvozvo inoitirwa kugadzira iri nyore kushandisa system kwaunogona kukurumidza kuwana kunyorera kwaunoda. Izvo zvinoshandiswa zvinogoverwa semapakeji akapatsanurwa muFlatpak fomati.
Iyo kugovera haina kushandisa echinyakare mapakeji mamaneja, panzvimbo peiyo inopa diki inokwidziridzwa base system atomically inoshanda mune yekuverenga-chete maitiro uye inoumbwa uchishandisa OSTree maturusi (iyo system mufananidzo inogadziridzwa nemaatomu kubva kuGit-senge chengetedzo).
Vagadziri veFedora nguva pfupi yadarika vanga vachiedza kudzokorora mazano akafanana neEndless OS sechikamu cheSilverblue chirongwa chekugadzira vhezheni yakagadziriswa yeFedora Workstation
Endless OS ndeimwe yekugovera kunosimudzira hunyanzvi pakati peLinux masisitimu yakagadzirirwa. Nzvimbo yebasa muEndless OS yakavakirwa paGNOME forogo zvakagadziriswazve.
1 Pamusoro Nyowani muEndless OS 3.9
2 Dhawunirodha uye edza Endless OS 3.9
Pamusoro Nyowani muEndless OS 3.9
Mune ino itsva shanduro yeEndless OS 3.9, desktop uye zvikamu zvekuparadzira (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus, nezvimwewo) zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni yeGNOME 3.38.
Pamusoro peiyo desktop nharaunda, akasiyana masystem system akagadziridzwa zvakare, senge Linux kernel iyo yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.8, systemd 246, dracut 050, Xorg 1.20.8, Mesa 20.1.1, NVIDIA 450.66, Flatpak 1.8.2.
Kuitwa kwenzvimbo yekudzidza ye Kubira, iko iko zvino kwakagoneswa nekutadza uye hakudi kuitiswa kwakaparadzana.
Wakawedzera kugona kuunganidza metric nezve kushanda nesystem (vabereki vanofanirwa kukwanisa kuongorora zvinoitwa nevana vavo pahurongwa) pamakomputa asina network yekubatana.
Kana zviverengero zvakambounganidzwa pamwe nekutamisa data kune server yepakati, ikozvino zvinokwanisika kuchengetedza iyo yekutarisa datakana pane yekunze USB drive uye woisa iwo kubva kune imwe system.
Rondedzero yekushandisa ikozvino inogara ichiratidza ese akaiswa zvirongwa, kwete izvo chete zvakawedzerwa kudesktop.
Panzvimbo pekuvakwa-muTotem vhidhiyo inoridza, Flatpak package yakaiswa kubva kuFlathub dhairekitori inoshandiswa.
Pa Chrome neChromium, iyo default "Navigation Center" peji haichashande.
Iyo yekuzvivakira-yekuvaka yekuwedzera zvinongedzo kudesktop yabviswawo, pachinzvimbo uchishandisa iyo yekubatanidza mapfupi ayo akajairwa akatsigirwa muChannel uye Chromium
Mapfupi ekumisikidza nekukurumidza ezvirongwa zvakakurumbira abviswa, pachinzvimbo chaunofanira kushandisa chikamu chinoenderana muApp Center.
Splash skrini yabviswa inoratidzwa kana kurodha kunyorera.
Akave nechokwadi chekuti X.org Server yakamhanya semunhu asina rombo rakanaka, pasina kupa rombo remidzi.
Pakupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yekugovera, unogona kutarisa ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha uye edza Endless OS 3.9
Kukura kwe Iyo iso mufananidzo weLite vhezheni ndeye 2.6 GB saka 4GB USB inokwana.
Panguva ye Iyo ISO mufananidzo weiyo Yakazara vhezheni muSpanish iri 16 GB uye nekuda kweizvi iwe uchada 32GB USB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Endless OS 3.9 inouya neKernel 5.8, Gnome 3.38 uye nezvimwe